Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseSeychelles zokuhamba » Ukuxhasa iincasa zeSeychelles
Ukuxhasa iincasa zeSeychelles
Uhambo oluya kwiiIqithi zeSeychelles aluphelelanga ngaphandle kokufaka isampulu kukutya kwasekuhlaleni. Babelana nabanye ngeemfuno zokuzama ukutya izitya zesiCreole kufuneka batyikitye uluhlu lwabo ngeholide yabo elandelayo.
Ukutya kweCreole kuyaziwa ngokudibanisa amayeza kunye neziqholo, okubonisa amagugu oluntu olwahlukeneyo kwisitya ngasinye.
Ukutya kweCreole ikakhulu kubandakanya iziqholo kunye neencasa ezinje ngesilili, iturmeric, masala, ijinja, igalikhi, iimveliso zabaphambukeli baseIndiya nabaseTshayina.
Kwabo banqwenela ukwanelisa izinyo labo elimnandi, iziqithi zikwabonelela ngezitya ezinamacebo athambileyo evanilla, nutmeg, isinamon kunye nelitronella.
Amanzi aluhlaza, iilwandle ezimhlophe ezibomvu kunye namahlathi emerald ayizizo zodwa iziqithi ezinokubonelelwa ziziqithi zaseSeychelles. Ukuba lilifa elihle njengendawo eliyingqongileyo, ayothusi into yokuba ukutya kwaseSeychelles Creole kuthabatha incasa yabahambi abasuka kuzo zonke iimbombo zomhlaba.
Ukuqhayisa nge-flavour yesibindi, esivela kooyisemkhulu, ukutya kweCreole kuyaziwa ngokudibanisa amayeza kunye neziqholo, kubonakalisa amagugu oluntu olwahlukeneyo kwisitya ngasinye.
Ukutya kweCreole ubukhulu becala kubandakanya iziqholo ezichumileyo kunye neencasa ezinje ngechili, iturmeric, masala, ijinja, igalikhi, iimveliso zabaphambukeli baseIndiya nabaseTshayina abongeze izitya zabo kwizitya zaseFrance nezesiNgesi ezaziswa ngabakholoniyali. Kwabo banqwenela ukwanelisa izinyo labo elimnandi, iziqithi zikwabonelela ngezitya ezinamacebo athambileyo evanilla, nutmeg, isinamon kunye nelitronella.
Xa ujonga iparadesi, iSeychelles icebisa ukuba iindwendwe zithathe inkalakahla yazo kuhambo lokufumanisa ukutya kunye nezinye zezi zidlo zinomtsalane.